आइपीएलः आज पनि सन्दीपलाई मौका, पन्जावमा छैनन् क्रिस गेल ! - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः आज पनि सन्दीपलाई मौका, पन्जावमा छैनन् क्रिस गेल !
काठमाडौं, चैत १८ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले किंग्स इलाभेन पन्जाव विरुद्धको खेलमा पनि मौका पाएका छन् । कोलकाताविरुद्ध ४ ओभर बलिङ गर्दै २९ रन खर्चिएर १ विकेट लिएका सन्दीपले आज पनि अन्तिम–११ मा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । आज दिल्लीले टस जितेर बलिङ रोज्ने निर्णय गरेको छ । यो खेलमा को–कोले पाए मौका? हेर्नुस्–
याे पनि पढ्नुस आईपीएलका चर्चित १० गैरभारतीय खेलाडी, कति होला मूल्य ?
दिल्ली–पन्जावले समान हार र जीत निकालेका छन् । पन्जावले एकमा हार र एकखेलमा जीत निकालेको छ । यता दिल्लीले पनि चेन्नईसँग हार बेहोर्दा मुम्बई र कोलकातामाथि भने जीत निकालेको छ । यी दुवै टिमले अन्तिम खेल जितेका थिए । पन्जावले मुम्बईलाई तेस्रो खेलमा पराजित गर्दा दिल्लीले ‘सुपर ओभर’ मा कोलकतालाई हराएको थियो । अंक तालिकामा समान ४ अंक भए पनि दिल्ली चौथो स्थानमा हुँदा पन्जाव पाँचौं नम्बरमा छ ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः पहिलो खेलमा सन्दीपले पाएनन् स्थान, दिल्लीलाई ब्याटिङको मौका
ट्याग्स: DC Vs KXIP, IPL, Sandeep Lamichahne